ट्रम्प र मोदीबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी? - Everest Dainik - News from Nepal
ट्रम्प र मोदीबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी?
फ्रान्समा भइरहेको जी७ बैठकका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच भेटवार्ता भएको छ ।
भेटपछि दुवै नेताले साझा प्रेस कन्फ्रेन्स जारी गरेका थिए । कन्फ्रेन्समा मोदीले कश्मीर मुद्दा भारत पाकिस्तानको आपसी मामिला भएको बताएका थिए । उनले यस मुद्दामा अर्को देशको मध्यस्थता नचाहेको पनि बताएका थिए ।
कन्फ्रेन्समा राष्ट्रपति ट्रम्पले पछिल्लो राति कश्मीरबारे मोदीसँग वार्ता भएको खुलासा गरेका थिए । ट्रम्पले भने, “उनलाई भरोसा छ कि स्थिति उनको नियन्त्रणमा छ । भारत र पाकिस्तान मिलेर आफ्नो समस्या सुल्झाउन सक्छन् ।”
मोदीले १९४७ अघि भारत र पाकिस्तान एउटै रहेको र अहिले पनि दुवै देश साझा समस्याबाट गुज्रिरहेकाले मिलेर वार्ताबाटै समाधान खोजिने पनि बताए । एजेन्सी
याे पनि पढ्नुस अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीबीच भेट, के–के भयो कुराकानी ?
ट्याग्स: डोनाल्ड ट्रम्प, नरेन्द्र मोदी